Alla meeshu Muran badanaa! “Waa gabay aad iiga qosliyay ee bal ila akhrista asxaabta sharafta leh. - Worldnews.com
Alla meeshu Muran badanaa! “Waa gabay aad iiga qosliyay ee bal ila akhrista asxaabta sharafta leh.
Waa gabay aad iiga qosliyay ee bal ila akhrista asxaabta sharafta leh.
Maansada waxaa la yiraadaa
Soomaaliya mas’uul badanaa
Magac dowlo badanaa
Maamul goboleed badanaa
Macno xumo badanaa
Muwaafaqo darro badanaa!
Alla Diidka” (atheism-agnostic) Iyo caruurta Qurbaha ku koraysa
Assalamu Alaikum Waraxamatullahi Wabarakatuhi khataraha ugu wayn ee caruurteena khaastan...
Qaran News 2018-03-16
Roobdoon iyo Alla-bari
Ayadoo abaar aad u kulul ay weli dhibaato ku hayso qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa madaxweynaha cusub, Maxamed C/laahi Farmaajo, wuxuu ku dhawaaqay in Talaadada...
Barraxaadda Dab-damiska iyo Dib-u-eegista Boobkii Hore ee Deyrka M A Cali
Tan iyo Ogos 2018ka waxa aan ka mid ahaa bulsho diiddanayd in muraad gooni ah loo weecsado qayb ka mid ah dhulka dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali, oo Wasaaradda...
Qaran News 2018-09-30
Khudbadii U Dambaysay ee Nabi Muxamed (NNKH)Ka jeediyay Carafa.9kii Dulxija Sanadkii Tobonaad ee Hijriyada ayay ahayd markii uu Rasuulkeenna Suuban (NNKH) uu Bini Aadamka...
Kulmiyuhu Kulmiyihii Hore Maaha, Markaa Waxaan Leeyahay New Kulmiye Ka Yaaca, Aniguna Waan Ka Tagay ...
“Kulmiyuhu Kulmiyihii Hore Maaha, Markaa Waxaan Leeyahay New Kulmiye Ka Yaaca, Aniguna Waan Ka Tagay Kulmiye, Waddani-Baanan Ku Biirayaa Insha Allaahu” Xildhibaan Nacnac...
Qaran News 2017-10-12
Macaluul ka dillaacady gobol ka mid ah Suudaanta Koonfureed
Hay'adaha Qaramada Midoobey ayaa sheegay in ku dhawaad shan malyan oo qof oo ku nool suudaanta koofureed ay si degdeg ah ugu baahan yihiin raashin. Hay'adaha ayaa sidoo...
Hay'adaha Qaramada Midoobey ayaa sheegay in ku dhawaad shan malyan oo qof oo ku nool suudaanta koofureed ay si degdeg ah ugu baahan yihiin raashin. Hay'adaha ayaa sidoo kale sheegay in dadkaas ay u baahan yihiin in laga taageero dhanka wax soo saarka beeraha. Ilaa 100,000 oo qof oo dadkaas ka mid ah, gaar ahaan gobolka Unity State ayaa la sheegayaa in ay macaluul haysato. South...
Faah faahin: ​Soomaali lagu laayay dalka Ethiopia
HERAR- Mas’uuliyiin katirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia, ayaa xaqiijiyay in deegaanka Hawadaay ee ku yaalla Bariga dalka Ethiopia lagu laayay boqolaal Soomali ah kadib ismaan dhaaf dhexmaray Qowmiyadda Oromada iyo shacabka Soomaalida ee halkaas ka ganacsada. Dilalkan oo badankoodu dhaceen habeen hore ayaa daba socday rabshado dhexmaray shacabka labada dhinac, waxaana...
Qaramada Midoobay ayaa macaluul kaga dhawaaqday qaybo ka mid ah Suudaanta Koonfureed, waana markii koobaad ee meel adduunka ka mid ah lagaga dhawaaqo muddo lix sano ah. waxaa kale oo jira digniino ku saabsan in ay macaluul ka dilaaci karto waqooyi bari Nigeria, Soomaaliya iyo Yemen. Haddaba waa maxay sabab ay wali macaluushu u jirto, maxaase laga qaban karaa?Maxaa ka dhacaya...
Shirkada Somaliland investment Company waa Xisaab-socod (account) Casriyeysan oo khatartiisa leh.qalinkii A/rahman fidhinle UK Shirkada Somaliland investment Company kuma laha dalka gudihiisa Rusqad iyo Liisan qaanuuni ah sidaa daraadeed habraacii iyo nidaamka loo maray ee lagu sameeyey Shirkadan Somaliland investment Company waxay baalmarsan tahay Xeer ka maalgashiga ee...